Daawo: Geesigii difaacay sharafta diinteena Islaamka oo si aan Caadi ahayn loogu soo dhaweeyey dalkiisa | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Daawo: Geesigii difaacay sharafta diinteena Islaamka oo si aan Caadi ahayn loogu soo dhaweeyey dalkiisa
(10-10-2018) Feeryahankii sida qiirada leh u difaacay sharafta diinteena islaamka ee Khabib Nurmagomedov ayaa si geesinimo leh loogu soo dhaweeyay dalkiisa Russia kadib guushii taariikhiga ahayd ee ka gaaray ninkii kibirka badnaa ee diintiisa,dalkiisa iyo aabihiisa u gafay ee Conor McGregor kaasi oo wadada toosan Garoonka Anzhi Arena ayaana xaflad loogu samayn doonaa.
Tan ugu yaabka badan ayaa ah in 30-jirkan aanu wali lasiin lacagtii uu feerka ka helay oo qiimeheedu ahayd $2million waxaana wali fasixin xiriirka Nevada State Athletic Commission oo sheegay in qalalaasihii ciyaarta kadib dhacay ay baaritaano ku samayn doonaan.
Feedhyahanka Muslimka ah ee Nurmagomedov Khabib ayaa dagaal galay taariikhda ku karbaashay ninka ay aadka u buunbuuniyaan Ingiriisku ee Conor McGregor, oo Sabtidii ay ku kulmeen feedh ka dhacay garoonka caanka ah ee T-Mobile Arena ee magaalada Las Vegas ee Maraykanka.
Feedhkan ayaa wareeggii afraad ku dhamaaday markii uu khabiib si mucjiso leh u garaacay Conor McGregor, kaas oo dalbaday in garsooruhu si degdeg ah uga qabto markii lagu qabtay xuurto /Qoor-sagaaro, sidaana ay guushu ku raacday Khabib.
Wareeggii koowaad markii ay ciyaartu bilaabantay, waxa qaab waalli ah oo ay cadho badan ka muuqato kusoo galay Khabib oo isla markiiba dhulka dhigtay Conor McGregor oo xattaa ay ku adkaatay inuu iska difaaco.
Dagaalka ayaa markii uu dhamaaday ee uu Nurmagomedov Khabib guusha qaaday, waxa ka dhalatay rabshad taariikhda gashay, waxaana Khabib oo cadhaysan uu ka booday xayn-daabka feedhka, waxaanu gacanta ula tegay Dillon Danis oo ah macallin tababaraha Conor McGregor, waxaana kasoo gaadhay ciidamada ammaanka ee garoonka joogay.
Dhinaca kale, tababareyaasha Khabib ayaa iyaguna gacanta saaray Conor McGregor, qas muddo socday kaddibna ciidamada ammaanka ayaa dib usoo celiyey kala-dambaynta garoonka, hase yeeshee Khabib lama guddoonsiinin biladda suunka ee uu ku guuleystay sababo la xidhiidha ammaanka garoonka oo aan si dhab ah u sugnayn.
Haddaba, Khabib ayaa shaaciyey in sababta uu waallida ugu dagaallamay ay ahayd Conor McGregor oo aflagaadeeyey diinta Islaamka iyo tababarihiisa Dillon oo intii ay ciyaartu socotayba hadallo cay ah la agtaagnaa feedhyahanka Ruushka ah.
Feedhyahanka Conor McGregor Oo Aflagaadeeyey Diinta Islaamka Ka Hor Intii Aan Sida Xun Loo Garaacin
Maalin ka hor intii aanay ciyaartani dhicin, McGregor ayaa aflagaadeeyey Diinta Islaamka isagoo doonayey inuu ka xanaajiyo Khabib, sidoo kale waxa uu weeraray aabbaha dhalay Khabib.
Khabib oo lacagta uu ku helayay feedhka kasokow difaacayey diinta Islaamka, ayaa waxa uu ciyaarta kaddib la hadlay warbaahinta, waxaanu faahfaahiyey sababta uu hab-dhaqanka xun ee weerarka tooska ah ugu geystay tababaraha, isla markaana intii ciyaartu socotay uu sida xamaasadda leh ugu dagaallamay, waxaanu yidhi: “Ma garanayo sababta ay qaarkiin uga hadlayaan wixii aan sameeyey dagaalka kaddib. Ka hor, McGregor waxa uu ka hadlay diintayda, dalkayga iyo aabbahay, waxa uu yimid Brkooklyn oo uu ku dilay dhawr qof. Maxaad taas uga hadli weydeen?.”
Khabib ayaa markii uu guuleystay waxa uu khadka telefoonka kula soo hadlay madaxweynaha waddanka Ruushka, Putin, waxaanu ugu soo hambalyeeyey guusha weyn ee uu gaadhay.
Magaalada uu ku dhashay Khabib ayaa waxa ka dhacay bannaan-bax weyn oo loogu dabbaal-degayo guusha uu gaadhay.
Labadan dagaalyahan ee Khabib iyo McGregor ayaa waxay u kala dhasheen Ruushka iyo Ingiriiska oo xurguf siyaasadeed oo meel xun maraysa ay ka dhaxayso, waxaanay taasi xamaasad usii yeeshay dagaalka dhacay Sabtidii.